किन Google लुकाउने कीवर्डहरू बजारका लागि उत्तम छ Martech Zone
किन Google लुकाउने कीवर्डहरू मार्केटरहरूको लागि उत्कृष्ट छ
बिहीबार, अक्टुबर 10, 2013 बिहीबार, अक्टुबर 10, 2013 Douglas Karr
यस्तो देखिन्छ कि सबैजना गूँडाईरहेका छन् र गुगलको बारेमा डरलाग्दो जैविक कुञ्जीशब्द डाटा प्रदान गर्दैन एनालिटिक्समा। जबकि म विश्वास गर्दछ यो को मान कम गर्दछ विश्लेषण केही हदसम्म, म तर्क गर्छु कि यो एक राम्रो चाल हो कि सामग्री बजारलाई मद्दत गर्दछ। मैले विगतमा यो लेखेको छु SEO मरिसक्यो र उद्योग मैले बिस्तारै बिस्तारै टाढा जाँदै गरेको देखेको छु। यो ताबूतमा अन्तिम कील हुन सक्छ।
यदि म यसको बारे मा खुशी लाग्छ भने, यो किनभने म हो। मैले यो हाम्रा मार्केटिंग स्वचालन ग्राहकहरूको साथ अन्तर्वार्तामा लेखेको थिएँ, दायाँ अन्तर्क्रियात्मक:
सबै कुञ्जी शब्दहरूको ट्र्याकि block रोक्न गुगलको चालले मार्केटरहरूको जीवनलाई अझ गाह्रो बनाउँदछ, तर असम्भव छैन। बजारहरूले अझै पनि क्लिक गर्न को लागी दरहरू वेबमास्टर डाटा प्रयोग गरी जैविक ट्राफिकले उनीहरूको समग्र इनबाउन्ड मार्केटिंग प्रयासलाई प्रभाव पार्दैछ भनेर बुझ्न मनिटर गर्न सक्षम हुनेछ। यदि केहि पनि हो, यसले हामीलाई अझ राम्रो मार्केटर बनाउने कार्य जारी राख्दछ। हामीले हाम्रो श्रोताको लागि मूल्यवान सामग्री लेख्न र हाम्रा श्रोताको लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ - कीवर्डहरूको पीछा नगरी, साइटहरूलाई हेरफेर गर्न र कृत्रिम रूपमा हाम्रो खोजी क्रमलाई बढाउन लिंकहरू खोज्न।
यो विशेष गरी औसत ब्यापारका लागि राम्रो समाचार हो जसमा वेब मार्फत कुञ्जी शव्दयुक्त सामग्री उत्पादन गर्न SEO रणनीतिमा लगानी गर्न बजेट छैन कृत्रिम रूपमा उनीहरूको सामग्रीको र content्कि of फुलाउन। हामी मध्ये धेरैले ठूला कम्पनीहरू र अरबौं डलरमा बढेको उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। जहाँ धोखा गर्न एक वित्तीय लाभ छ, कम्पनीहरु धोका दिनेछन्। र उद्योग धोका दिईएको छ (र धोखा र धोखा)। धेरै खेलाडीहरु आफ्नो रणनीतिहरु को बारे मा भ्रम हो तर यो स्पष्ट छ कि Google छैन। गुगल कार्बनिक ट्राफिक जैविक बन्न चाहन्छ, धनी एसईओ कम्पनीहरू द्वारा संचालित होईन जुन करोडौं डलरको स्यान्डबक्सहरू छलकै पार्ने तर उनीहरूको ग्राहकहरूको श्रेणीमा ल्याउने तरिकाहरू पत्ता लगाउन को लागी। गुगलको परिवर्तनले ती मानिसहरूलाई हानी पुर्याइरहेको छ - तपाईं हैन।
र, जब तपाईं एक खास संभावनामा कुनै विशेष कुञ्जी शब्द विशेषता दिन सक्नुहुन्न, तपाईंले ती व्यक्ति जैविक रूपमा आएको र कुन पृष्ठबाट उनीहरूले गर्नुभयो भनेर जान्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको साइटमा तपाईंको सम्भावित आगमन प्रविष्टि पृष्ठको शीर्षक थाहा पाउँदा तपाईंलाई मूल्य प्रदान गर्ने सामग्री अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ। र कीवर्ड रिसर्च र प्रतिस्पर्धी अनुसन्धानले अझै पनी फेला पार्ने र लेख्नका लागि अवसरहरू फेला पार्न सक्छ जुन फेला पर्नेछ र मूल्यवान हुनेछ। खोज अप्टिमाइजेसन कुनै पनि सामग्री रणनीतिको लागि आधार हो, तर राम्रो सामग्री लेख्ने र साझेदारी गर्ने (लिखित, बोलिने र दृश्य) सँधै पृष्ठमा चिह्नित पृष्ठ शीर्षकहरू वा कुञ्जीशब्द घनत्वलाई मात दिनेछ।
वेबमास्टर डाटा, सामग्री डेटा, र एनालिटिक्स डाटा बीच प्रदान गरिएको खाली ठाउँले तपाईंलाई उत्कृष्ट सामग्री विकास गर्न तपाईंको क्षमतालाई तिखार्न मद्दत गर्दछ। यसको कुञ्जी शब्द अनुभागमा जम्प गर्नुको सट्टा विश्लेषण, तपाइँ ट्राफिकमा पृष्ठ शीर्षक द्वारा कुन कुन लेख तपाइँको कम्पनी को सब भन्दा अधिक यातायात प्रदान गरीरहेको छ मा डुबाउनु पर्छ। कुञ्जी शब्दहरू ध्यान भंग गर्दै थिए र धेरै मार्केटरहरूलाई अल्छी बनाए। उनीहरूले केवल मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्ने सामग्रीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा कुञ्जीशब्दहरूमा आधारित अधिक ट्राफिक ड्राइभ गर्न क्रेप लेख्न छोडे।
वास्तवमै कुनै डाटा छैन जुन तपाईंको सामग्रीको उत्कृष्ट सामग्री रणनीति विकास गर्ने क्षमतामा प्वाल पार्दै छ। तपाई अझै वेबमास्टर डेटा समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ किवर्डहरू जुन अधिक सामग्री चलाइरहेका छन् बुझ्नका लागि - तर तपाई यसलाई सामग्रीमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ जुन सब भन्दा धेरै हेराई र रूपान्तरणहरूमा सवारी चालक छ। तपाईले खोज्नु भएको खोजशब्दहरूको वरिपरि प्रस Unders्ग बुझ्दै एक टनले थप अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न सक्दछ के लोकप्रिय वा लोकप्रिय छैन।
एक उदाहरणको रूपमा, 'गुगल खोजशब्दहरू प्रदान नगरिएको' मा ध्यान केन्द्रित गर्दा प्रवृत्ति र वैकल्पिक समाधानहरूको बारेमा केहि ब्लग पोष्टहरूमा मेरो अगुवाई गर्न सक्दछ। यसको सट्टामा, म यहाँ केन्द्रित छु यसले कसरी यसले बजारहरूलाई मद्दत गर्दछ। त्यो प्रस ultimate्ग अन्ततः मेरो सामग्री रणनीति को लागी एक कुञ्जी शव्द संयोजन मात्र टसिंग भन्दा बढी मूल्यवान साबित हुनुपर्छ! तपाईको कुञ्जी शब्दहरूको वरिपरि प्रस your्ग तपाईंको ध्यानको केन्द्रबिन्दु पनि हुनुपर्दछ!
यो ध्यान राख्नु पर्छ कि केही एनालिटिक्स प्रदायकहरूले पनि यो दृष्टिकोण लिइरहेका छन्। जिन्जा मेट्रिक्स जाँच गर्नुहोस्: GinzaMetrics प्लेटफर्म ठेगानामा नयाँ सुविधाहरू Google को सुरक्षित खोज (खोजशब्द प्रदान गरिएको छैन) अपडेट.
टैग: Google विश्लेषणगुगल खोजशब्दहरूकुञ्जी शब्द प्रदान गरिएको छैनप्रदान गरिएको छैन
रिपोटोलजी: अनलाइन समीक्षाको लागि चेतावनी प्रणाली
Uberflip सामग्री मार्केटिंग हब्स
एडवर्ड ली डासन
अक्टूबर २०, २०१ at २:10० अपराह्न
यसले मलाई रेभेनको कीवर्ड ट्र्याकर एक बर्ष पहिले बन्द भएको सम्झना गराउँछ। मेरो टेबल भरमा नै SEO केटासँग मेरो साइटको लागि केहि राम्रो सुझावहरू थिए। एक ब्रान्डि onमा ध्यान केन्द्रित गर्दै थियो जहाँ उनको अनुसार, वेबमास्टरबाट खोजी सर्तहरू एकपटक कार्बनिक माध्यमबाट तपाइँको साइटमा उनीहरूको बाटो फेला पारे भने तपाइँको ब्रान्डि strategy रणनीतिले काम गरिरहेको छ। हामी एनालिटिक्स बाट आगमन खोज शब्दहरु लाई हटाउन को लागी, यस मा व्यावहारिक समाधान छन्।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०11 बिहान
यी पोष्टका लागि धन्यबाद। सामग्री मार्केटि brief छोटकरीमा बुझ्न र विश्लेषण गर्न समय लिनुहोस् र राम्रो व्यापार परिणामहरू ड्राइभ गर्न तपाईंले अप्रत्याशित तरिकाहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
मैले यो पढ्न साँच्चिकै राम्रो समय पाएँ .. धेरै जानकारीमूलक .. साझेदारीको लागि धन्यवाद!
अक्टूबर २१, २०१ at २:०15 बिहान
म १००% सहमत छु। एसईओ डरको कारण पैदा भएको थियो र डिजिटल मार्केटिंग बुझ्दैन। गुगलले खेल मैदान समतल गर्दैछ। यो मार्केटिंग को शुरूवात हो फेरि इन्टरनेट मार्केटि into मा फर्कदै। त्यहाँ एसईओ कम्पनीहरु को सही छ कि सबै भन्दा राम्रो मार्केटरहरु छन्। तर तिनीहरू एसईओ विशेषज्ञको रूपमा आफैलाई टाउट। SEO मार्केटिंग गर्दैछ। एसईओ केहि उच्च प्रविधि प्रक्रिया होइन कि केवल कुलीन भित्रीहरूले मात्र मास्टर गर्न सक्छन्। यस्तो देखिन्छ कि सबै एसईओ कम्पनीहरू 100 मार्केटिंग सिक्न बाध्य हुनेछन्।
जनवरी 19, 2014 मा 11: 27 एएम
हो वास्तवमा! विश्लेषणको कुञ्जी शब्द अनुभागमा हाम फाल्नुको सट्टा, हामी पृष्ठको शीर्षकबाट ट्राफिकमा उफ्रिनु पर्छ कुन लेखले हाम्रो कम्पनीलाई सब भन्दा बढी यातायात प्रदान गरिरहेको छ भनेर जान्नको लागि। मलाई लाग्छ कि किवर्डले केहि बजारलाई सुस्त बनायो। तिनीहरू मध्ये केहि केवल कवच को आधारमा अधिक यातायात ड्राइभ गर्न को लागी "मूर्ख" लेख्न को लागी समग्र सामग्री मा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा जो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
जनवरी 21, 2014 मा 11: 55 एएम
हो डाटा राम्रो सामग्री को विकास गर्न को क्षमता तिखार्न सहयोग गर्नु पर्छ। ल्यान्डि pages पृष्ठहरू द्वारा हामी हाम्रो साइटमा आगन्तुकहरूले देख्ने / फेला पार्ने कुरामा बढी ध्यान दिन सक्छौं।